अर्थ – Page 134 – Ganatantra Online
चैत्र २४ , २०७६ - सोमबार
विकासमा सकारात्मक चिन्तनको आवश्यक
घोराही, ३० कात्तिक । आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि पनि सकारात्क सोचका आवश्यक रहेको एक कार्यक्रका वक्ताहरुले बताएका छन । स्थानिय निकायमा निर्वाचन जितेर जनप्रतिनीधि आए पनि पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै मिलेर काम गर्न सके गाउँको मुहार फेर्न समय नलाग्ने उनीहरुको भनाई थियो । (more…)...
आधुनिक बसपार्कको काम शुस्त
यमकला भुसाल तुलसीपुर, कात्तिक । १५ महिनामा निर्माण भैसक्नु पर्ने तुलसीपुर बसपार्क अहिले सम्म पुरा भएको छैन । २०७४ बैशाखमा काम शुरु भएको हो । यस बर्षको भदौमा काम सम्पन्न गर्ने सहमती भएको थियो । (more…)...
जुम्ला । जडीबुटीबाट जुम्लाका महिला आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । घरायसी काम सकिएकाले उनीहरू अहिले समूहमा नजिकैका स्थानमा जान थालेका छन् । (more…)...
मलेसियन सरकारले बढायो कामदारको पारिश्रमिक, अब मासिक ११ सय रिंगेट
काठमाडौ। मलेसियन सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । त्यहाँको संसद्माआगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै मलेसियाका अर्थमन्त्री लिम ग्वान इङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । (more…)...
एम.एस. अटोको एक्सचेन्ज क्याम्प
घोराही,१८ कार्तिक । एम.एस.अटोले मोटरसाइकल एक्सचेन्जको बहार ल्याएको छ । नेपालीहरुको महान चाड तिहार अर्थात भाईटिकाको शुभ अवसरमा सुजुकीको घोराहीका आधिकारिक बिक्रेता एम.एस. अटोले मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पको आरम्भ गरेको छ । (more…)...
लो भोल्टेज हटाउन करौडौको ट्रान्सफर्म
दिवाकर पोख्रेल देउखुरी,कातिक । नेपाल सरकारको विद्युत्मा सामुदायिकरण गर्ने निति अनुसार स्थानीय स्तरमा स्थापना भएका सामुदायिक विद्युत् वितरण केन्द्रबाट उपभोत्ताले सहज रुपमा लाभ लिएका छन् । (more…)...
घोराही, कार्तिक | घोराही उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका अटो टेम्पोहरुलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । (more…)...
दाङ, १६ असोज । जिल्लामा पछिल्लो समयमा हजारीको फुल खेतीगर्ने तर्फ आकर्षण वढदै गएको छ। व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा फुल खेतीगर्ने थालिएको हो । (more…)...